ukuseta urhwebo ooVimba-Funda ukuRhweba
tag: ukuseta urhwebo
I-USD / CAD Kwindawo yoMthengi!
I-USD / i-CAD ithengiswa ngokubomvu nge-1.2633 ngexesha lokubhalwa, kodwa i-bias iyakhula emva kokuba i-US ADP engeyiyo ifama yeNgqesho yoTshintsho ichaze ngcono kunedatha ebilindelwe ngaphambili namhlanje. Isalathi saxelwa kwi-568K xa kuthelekiswa ne-425K elindelekileyo.
I-Index yeDollar iyashukuma kwaye ime kanye ngezantsi koxinzelelo olunamandla. Ukwenza uqhawulo olusebenzayo kunye nokuphakama okuphezulu okuphezulu kunokubonisa ukuba i-greenback inokukhulisa ukukhula kwayo. Intshukumo yexabiso le-USD / CAD libonakalise ukukhula okunokubakho ngaphambi kwe-US NFP.
I-USD / CAD yehlulekile ukuzinzisa ngaphantsi kwenqanaba le-R1 (1.2625) yemihla ngemihla kwaye ngoku ilwa nzima ukuzinzisa ngaphezulu komgca weendaba wefolokhwe (ml). Ukuphakama okuphezulu okuphezulu, ukuvalwa kwe-bullish ngaphezulu kwe-1.2648 ephezulu kwangoko kunokwenza ukuba kuqhubeke ukukhula.
Esi sibini sinokunyuka ngaphezulu emva kokusilela ukubuyela ukufikelela kwinqanaba le-pivot yemihla ngemihla yenqanaba le-1.2585. Ngokobuchwephesha, ixabiso belihamba ecaleni ngaphambi kokuphinda likhule kwakhona.
Logama ihlala ngaphakathi komzimba wefolokhwe enyukayo, isibini se-USD / CAD sinokubuya sibuyele kwinqanaba le-1.27 yengqondo.
tags Uhlalutyo lwedatha, ukuseta urhwebo, USD / CAD, USDCAD
I-USD / JPY ijonge ukurhweba ngokuPhezulu!
I-USD / JPY yajikeleza ngaphezulu njengoko iJapan Yen yenziwa buthathaka kukukhula kweJP225's (Nikkie). Ngokobuchwephesha, esi sibini sibonisile imiqondiso egqithileyo, ke intshukumo ephezulu ibilindelwe ngandlela thile.
Ngokumangalisayo okanye hayi, esi sibini siqhubeka nokukhula kwaso nokuba amanani ezoqoqosho aseMelika eze kakubi kunokuba bekulindelwe. I-Yen yaqala ukuhla ngokunyanisekileyo emva kwe-BOJ. Abarhwebi abayikhathalelanga i-Index Index yeDola kwaye bayityhalele phezulu kuphela ngenxa yokuba iYen ibibuthathaka kakhulu.
Ukukhula okunokubakho kwe-DXY emva kokuthengiswa kwangoku kunokuzisa abathengi abaninzi kwi-USD / JPY. I-US Flash Production ye-PMI kunye neeNkonzo zeFlash PMI ziye zayeka ukubonisa ukwehla kolwandiso. Okwangoku, i-USD isalindelwe ukuba inyuke emva kwe-hawkish FED.
Uhlalutyo lobuchwephesha lwe-USD / JPY!
I-USD / JPY ifikelele kwinqanaba eliphezulu le-pitchfork (uml) ngexesha lokubhala. Ikhuphuke kangange-110.20 ngaphezulu kwe-110.08 yokuxhathisa kwangaphambili. Ngokobuchwephesha, ukuqhekeka okuphezulu, i-rally, bekulindelwe ngandlela thile njengoko esi sibini siye saqhubeka nokuhlala kufutshane nokwehla komgca weporkfork ephezulu (UML).
Ukusilela kwayo ukwenza amahla amancinci asezantsi okanye ukufikelela ubuncinci kunye nokuzama kwakhona inqanaba le-109.06 kubonakalise umlenze omtsha phezulu. Kwakhona umgca wokuhambisa ongaphandle (SL) umele ukumelana okunamandla. Ukuqhekeka okukhohlakeleyo kubonakalise ukukhula okungaphaya.
Ukutsiba ngaphezulu kwe-UML kunye ne-SL kubonwe njengophawu lokunyusa. Ukuzinzisa ngaphezulu kwe-110.08 kunye nokwenza uqhawulo olusebenzayo kumgca ophezulu we-median (uml) kunokuvula ukuqhubeka okungaphezulu!
tags Forex, Uhlalutyo Technical, ukuseta urhwebo, USD / JPY